Kuva mudzidzisi: ndeapi mabhenefiti mashanu ebasa iri? | Kuumbwa uye kudzidza
Kuva mudzidzisi: ndeapi mabhenefiti mashanu ebasa iri?
Nyanzvi zhinji dzine basa kushanda sevadzidzisi. Basa rinorema kupfuura misoro, semuenzaniso, kuti vadzidzisi vane mazororo mazhinji. Basa rekudzidzisa uye kudzidzisa vadzidzi, mumatanho ese ezvidzidzo, rakakosha kwazvo nekuda kwesimba rine tsika sembeu yehupenyu. Ndezvipi zvakanaka zvekushanda semudzidzisi?
1 1. Ita kuti basa rako rive rechokwadi
2 2 Basa re timu
3 3. Kuramba uchidzidziswa
4 4. Kwete basa renguva dzose
5 5. Basa rinoshandura hupenyu
1. Ita kuti basa rako rive rechokwadi
Usazvipire kukudzidzisa kana iwe usinganzwe kudana kwechokwadi kwekudzidzisa. Iyo Kuneta kwevashandi syndrome mukuidzidzisa kunogona kuita kuti unzwe kutapurwa zvakanyanya. Vadzidzi vanokodzera kuve nevanyatsofara uye vadzidzisi vehunyanzvi nebasa ravo.
Basa remudzidzisi rakakosha zvekuti, kunyangwe ukazvipira pachikamu ichi, uchave nerukudzo rwekuva nezuva rako pachako pakarenda rekupemberera basa rako: iyo 27 of noviembre. Zuva rakakwana rekuwedzera kubata kwemavara kusvika mumatsutso pamwe nemanzwiro ekunzwa kunge protagonist yezuva iro rinomiririra mutero wakakodzera kune vakawanda vadzidzisi vanoshanda mazuva ese kuti vape zvavanogona.
2 Basa re timu
Semudzidzisi, iwe uchafanirwa kutora akawanda mabasa padanho remunhu, zvisinei, iwe zvakare unoisa mukuita kukosha kwekubatana pamwe nekuve chikamu che fakaroti kubva panzvimbo imwechete. Nenzira iyi, unogona kudzidza kubva kune vamwe vaunoshanda navo, kujekesa kusahadzika uye kuita sarudzo dzakajairika.
3. Kuramba uchidzidziswa
Kana iwe uchitsvaga basa rinoda zvakanakisa iwe, iro basa raunofanirwa kugadzirisa ruzivo rwako nguva nenguva, saka kudzidzisa ndiro dambudziko rako. Nekuti semudzidzisi iwe zvakare uri wekusingaperi mudzidzi uyo ane hunhu hunosungirwa kuti arambe achivandudza hunyanzvi hwake. Uye zvirokwazvo, iwe unofanirwa wana hunyanzvi Beyond yako pachako chidzidzo, semuenzaniso, iwe zvakare unoda tekinoroji hunyanzvi.
4. Kwete basa renguva dzose
Iyo yekirasi yakazara nehupenyu. Uye zvakare, mudzidzi wega wega akasarudzika uye haataurike. Neiyi nzira, kana iwe uchitsvaga basa risiri renguva dzose, basa mune iro zuva rega rega rakasiyana, saka kuve mudzidzisi kunogona kukupa iwe iwo mukana wekuti uwane iwo manzwiro yechiitiko chakaratidzirwa nekuenderera mberi kwekusimudzira uye zvitsva.
5. Basa rinoshandura hupenyu
Zvinogoneka kuti kana iwe uchirangarira avo vanhu vakamaka hupenyu hwako nenzira yakanaka, avo vakakukurudzira kuti ukure, ndangariro yemudzidzisi uyo akawedzera kuzviremekedza kwako nekukubatsira kuti uwane basa rako rinouya mupfungwa. Kana iwe uri mudzidzisi akanaka, iwe unogona zvakare kuve neyakajeka pesvedzero pane iro ramangwana revanhu vazhinji. Uye basa iri chikonzero che mufaro chero bedzi iwe uchidzidzira zvine hunhu. Iri ibasa chairo revanhu.
Mafirimu mazhinji anotenderera pakudzidzisa anogona kukukurudzira iwe nenzira yekunzwira tsitsi kuti unzwisise kukura kwechiitiko chakakosha padanho rezvemagariro senge remudzidzisi; sezvo dzidzo iri imwe yembiru dzakakosha mukusimudzira nzanga. Julia Roberts akaridza hunyanzvi hwekudzidzisa hunyanzvi mu "The Mona Lisa Smile." Mune fungidziro yeboka, iyo firimu "Los Niños del Coro" yakasiya mucherechedzo wayo kune vazhinji vanoiona.
Asi kana nekushanda semudzidzisi iwe unogona kusiya mucherechedzo wakanaka pahupenyu hwevadzidzi vazhinji sekusimudzira ruzivo, hunhu hwevanhu uye ungwaru hwepamoyo, kudzidzisa kuchachinja hupenyu hwako zvachose. Mune mamwe mazwi, vadzidzi vanoshandurawo zvakagadzirirwa nemudzidzisi kuburikidza nenyaya dzakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Kuva mudzidzisi: ndeapi mabhenefiti mashanu ebasa iri?
Kutanga yemahara online kosi pane ADHD
Zvitanhatu zvikanganiso zvekudzivisa kana networking